Kutheni iimveliso zexabiso eliphantsi zibiza kakhulu? | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Adriana | | Uqoqosho lwaseKhaya, Yendalo
Los iimveliso zezinto eziphilayo kunye nokusingqongileyo kubiza kakhulu kuneqhelekileyo. Esi sesona sizathu siphambili sokuba uninzi lwabantu lungadli okanye lungathengi imveliso ye-organic.
Kodwa abantu abazazi izizathu zokuba kutheni imveliso yendalo ibiza kakhulu.
Oonobangela abaphambili zezi:
Iimveliso ze-Organic zikumgangatho ophezulu kunezo zihlala zithengwa kuzo zonke iindawo. Nokuba kukutya, impahla, izixhobo zombane, iimoto, phakathi kwezinye. Ixesha lalo lide kwithuba eliphakathi kwaye kwimeko yokutya ziqulathe zonke izondlo ekufuneka bezinazo.
Uninzi lweemveliso ze-ecological zenziwe ngendlela encinci okanye yobugcisa, ke azinazo izixa ezikhulu zemveliso kwaye ke iindleko zokuzivelisa ziphezulu.
Izinto eziluhlaza abazisebenzisayo zibiza kakhulu kuba zezendalo okanye zinemveliso encinci, ke iindleko ziphezulu kunesiqhelo.
Iinkqubo zemveliso zinde kuba zisebenzisa itekhnoloji encinci kunye nobugcisa bendabuko okanye bendabuko.
Uninzi lwe Imveliso yendalo Basebenzisa abasebenzi abahlonela imigaqo esele ikho, kwelinye icala, kuqhelekile ukuba iinkampani ezinkulu zikhuphe abasebenzi zize zisebenzise abasebenzi abamnyama okanye zisebenzise abasebenzi.
Iimveliso ze-ecological zinempembelelo yokusingqongileyo kwimveliso yazo kwaye ngokubanzi zisebenzisa amandla amancinci.
Zonke ezi zizathu zezona zinto zenza ukuba iimveliso zexabiso eliphantsi zibize kakhulu kunesiqhelo.
Kodwa ukuba sihlalutya umgangatho kunye nobude beemveliso ze-organic xa uzithelekisa nezo ziqhelekileyo, kugqityiwe ukuba kufanelekile ukuchitha kwimveliso ye-organic okanye nobuhlobo nokusingqongileyo.
Kubalulekile ukuba ngokwamathuba ethu ezoqoqosho sixhase iimveliso ze-organic ukuze bakwazi ukwehlisa amaxabiso abo ukuba kukho ibango elikhulu nelomeleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Uqoqosho lwaseKhaya » Kutheni iimveliso zexabiso eliphantsi zibiza kakhulu?
Iimveliso, izixhobo kunye nayo yonke into ibibonakala inomdla kum, kodwa ekubeni zibhekisa kwipleyiti yesilivere, zibiza kakhulu, kodwa zinomdla kakhulu
umdla kakhulu 🙂